Weeraryahanka Nouha Dicko oo laga yaabo inuu ku biiro Blackpool.
6/26/2012 10:04:00 | Comments() London--KNN-Nouha Dicko oo weerarka kaga ciyara Kooxda Wigan Athletic ayaa laga yaabaa inuu iskaa tago naadigaasi. Nouha Dicko ayaa sheegay inuu doonayo dib ugu laabashada Blackpool uu hore ciyaaryahanadeeda ka mid ahaan jiray.
Laacibkaan oo udhashay dalka France ayaa 10 kulan uu ciyaaray waxa uu Wigan udhaliyey 4 gool.
Ciyaaryahan ayaa waxaa baadi goob ugu jira naadiga Westham oo sheegay inay xiiseyneyso la wareegida laacibkaasi.
The Wigan Evening Post ayaa sheegtay inay fasaxi doonaan Nouha Dicko hadi uu iskaga jecleystay ka tagista JJB stadium.